Bayle oo hirgaliyay hannaan lagu boobayo hantida dad weynaha | KEYDMEDIA ONLINE
Bayle oo hirgaliyay hannaan lagu boobayo hantida dad weynaha
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, wuxuu hormuud u noqday hirgalinta qorshe shacabka lagu qaldayo si loo boobo hatida dad weynaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa tan iyo biilwgii bishii April, waday hirgalinta qorshe laga soo maleegay xaafiiska Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, kaas oo ah inuu dadka shacabka ah ka dhaadhiciyo in Dowladdu la daalaa-dhaceyso dhaqaalo la’aan, taas oo ah mid xaqiiqda ka fog.
Bayle, wuxuu 60 cisho gudahood dhowr jeer goob fagaaro ah ka sheegay in waddamada deeqaha bixiya ay goosteen lacagtii ay ku taageeri jireen DF, oo hadda dalku wajahayo xaalad dhaqaale xumo oo aad u darran.
Wasiirka Maaliyadda ma uusan soo bandhigin, dalalka Soomaaliya deeqaha siin jiray ee hadda lacagta jaray, ma uusan xusin caddadka lacagta la gooyay, taas baddelkeeda wuxuu bixiyay ‘Erey bixin’ caan noqotay oo ah “Hadda waxaan taagannahay sagxadda,”
Waxaa is weydiin mudan halka ay Dowladdu gaysay dhaqaalihii afartii sano ee la soo dhaafay uu Wasiir Bayle, sheegayay inuu kordhay, iyo waxa ku dhacay isku filnaanshihii iyo caga ku istaaggii, uu maamulka Farmaajo ku faani jiray?
Ilo xog ogaal ah, oo ku dhow Madaxtooyada ayaa Keydmedia Online, u xaqiiqiyay, in billowgii bishii April, ka hor muddo korosigii, la dajiyay qorshe, dadka looga dhaadhicinayo in Dowladdu aysan wax dhaqaalo ah gacanta ku hayn, iyadoo qasadku yahay in la boobo lacagta taalla bankiyada ee DF leedahay.
Qorshahaan, waxaa jilayaal looga dhigay Wasiirka Maaliyadda Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta iyo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaadday, waxaana si loo helo dhaqaalo dheeraad ah, dadkana looga dhaadhiciyo fikirkaan, la go’aamiyay saddex arrin.
In Madaxdu soo fariisato warbaahinta dadkana u sheegaan in Dowladda ay dhaqaalo la’aan ku dhacday, si fiicanna arrinkaas dadka looga gado.
In bulshada Soomaaliyo la weydiisto dhaqaalo, loola soo bandhigo Akoonno ay lacag ku aruuriyaan, si loo helo lacag dheeraad ah.
Kadib marka labadas arrin hirgalaanna la boobo dhaqaalaha Dowladda oo doorasho lagu galo, mushaaraadkana la joojiyo, dadkana loo sheego in hore loo soo bandhigay dhaqaalo la’aanta.
Qodobbada koobaad iyo labaaad ee qorshahaan, waxaa billaabay Wasiirka Maaliyadda oo bulshada hor yimid, kadibna dalbaday in dhaqaalo la arruuryo, waxaa loo madlanaa in Rooble iyo Farmaajo, warbaahinta ka soo muuqdaan isla isbuucaas, hayeeshaa xaaladda dalka ayaa is badeshay, kadib markii ay magaalada inteeda badan la wareegeen Ciidamadii Badbaadada Qaranka.
Inkastoo dhaqaalo aruurin aysan hirgalin hadana qorshihii boobka lacagta waa dhaqan galay, oo Bayle, ayaa bulshada ka dhaadhiciyay in dhaqaalo la’aan jirto, taas oo fududeysay in saddexda dhinac kala goostaan xoolohii dad weynaha.